u-Luus no-Moreeng bakhaliswa ukungazinzi behlulwa kwi-T20I yesithathu
Kulandela ukuqala kahle ngebhola ne-bat, ama-Proteas esifazane asalelwe kancane ekugcineni ngenxa yokungenzi kahle phakathi nendawo nomdlalo, ingxenye umqeqeshi, u-Hilton Moreeng nokapteni obambile, u-Suné Luus, abavumelane ngayo ukuthi kube umehluko ekuhlulweni kwabo kumdlalo wesithathu we-T20 international yesithathu bedlala ne-Pakistan e-Pietermaritzburg ngeSonto.
Emuva kokunqoba ngezinti eziyisishagalombili kumdlalo wesibili we-T20I ngoMgqibelo, i-South Africa ayikwazanga ukunqoba imidlalo ilandelana ngenxa yama-runs awu-55 emabholeni awu-45 okushaywe umdlali we-Pakistan u-Iram Javed okusize iqembu elivakashile linqobe ngezinti ezine futhi kubabeke ngaphambili ngo-2-1 kwi-series enemidlalo emihlanu.
Njengoba behlanganise u-138/3 kuma-overs abo awu-20 futhi beqale kahle ekuvikeleni umphumela wabo, u-Luus ukholwa ukuthi iqembu lakhe liziphoxile phakathi nendawo ne-innings.
“Akuwona umphumela akade siwufuna,” kusho u-Luus kulandela ukuhlulwa e-City Oval.
“Siqale kahle ngokushaya futhi sigcabange ukuthi u-139 kule-wicket ungavikeleka. Bese, indlela u-Shabnim (Ismail) no-Moseline (Daniels) abaqalengayo, besibabeke ku-3/3. Besazi ukuthi kuzoba umdlalo osondelene. Siqale kahle kodwa silahlekile kuma-overs aphakathinendawo, ibhola elilodwa noma amabili engahambisananga nezinhlelo zethu. Kumele sisebenzele ngakulokho.”
u-Moreeng uvumelane nokapteni wakhe, waphinde wathi iqembu lakhe liphinde lathula kwi-innings yabo beshaya futhi bebenganezezela ngama-runs. Uphinde akholwe ukuthi ziningi izifundo ezikhona kulemidlalo futhi kuzosebenzela iqembu kusasa.
“Kukho konke akukona esingakuthanda, ikakhulukazi emuva kwendlela esaqala ngayo ngokushaya,” esho ephawula.
“Sakuhlela futhi sezwa sengathi sishodelwe ama-runs awu-20 emuva kwendlela esaqala ngayo koluluhlobo lwe-wicket. Abashwibi baphinde bahlela kahle. i-spell sokuqala sasisihle, sathola izinti ezintathu kuma-overs okuqala ayisithupha, ayisikhombisa futhi bekumele sizihlelele i-innings.”
“Kumele ngisho, i-Pakistan iphinde yashaya kahle, bebuya kumdlalo kwaphinda kwaphela zisondelene, kumele sifunde kulokho. Ngisho umshwibi oshwibe i-over yokugcina, uzofunda kwisipiliyoni, ukuthi yini angayenza nokuthi yini okungamele akwenze kuma-overs anjalo,” enezezela u-Moreeng.
Uma ebuzwa ngokuthi iqembu lingalungisa kanjani ezindaweni ezimbalwa ngendlela abadlala ngayo ngaphambi kwe-T20I yesine ebalulekile e-Benoni ngasekupheleni kwesonto, u-Moreeng ukhulume ngokuvimba kweqembu nokushwiba, wancoma ukuthuthuka kwabashayayo.
“Kumele silungisa ngasekuvimbeni. Senza kangcono ngasekushayeni, singashaya ngolaka, izinhlanganiso zibangcono futhi kumele sigade singaphumi kalula. Indlela esihlela ngayo ukushwiba kudinga ukubhekwa ngoba siqala kahle bese phakathi nendawo, siyanyamalala. Kumele sizame futhi sibone ukuthi singaqhuba kanjani ngendlela efanayo ukweseka indlela abavulayo abaqale ngayo,” esho echaza.
“Kumele sinqobe umdlalo olandelayo ukuze sihlale kwi-series futhi abesifazane bayazi ukuthi kuzoba nzima. Kuphinde kushintshe inkundla, kushintsha isimo futhi luhle ushintsho,” esho eqhubeka umqeqeshi.
Nokho behluliwe, kukhona abadlale kahle njengo-Tazmin Brits no-Moseline Daniels, abathole ama-T20 career best abo. Uthole u-50 wakhe wokuqala kuma-T20 u-Brits, eshaya u-70 emabholeni awu-61 engakhishiwe kwathi u-Daniels waqhakaza ngebhola, wathola u-3/13 kuma-overs akhe amane.
u-Luus ubancomile, wathi: “Udlale kahle phambili u-Tasmin. Bekungekuhle ukulahlekelwa u-Lizelle (Lee) ngasekuqaleni kodwa ukhombise ukukhula ngendlela ashaye ngayo futhi wawuthwala lowo mthwalo, ukuhambisa iqembu ngo-70 wakhe futhi bekubalulekile lokho. Kube i-innings encomekayo ephuma kuyena.”
“Hlezi enesimilo u-Moseline. Imidlalo yakhe emugcina eqenjini futhi ebencomeka kwimidlalo emibili edlule. Njalo uma ezosidlalela, udlala kahle futhi wenza okusemandleni akhe. Siyamuncoma futhi sithemba ukuthi uthola eminye imidlalo ukuze aqhubeke nomdlandla ofanayo,” isho ijabule i-all-rounder.
Umdlalo wesine uzodlalelwa e-Willowmoore Park ngo-22 May 2019 kusukela ngo-13h00.
Yonke i-T20 series phakathi kwe-South Africa ne-Pakistan izovezwa ku-YouTube we-Cricket South Africa.
Ungaphinde ukuthole ku-1World Sports Radio. Tweet us: @GuerillaSA Listen at www.1WSR.com
U-50 ka-Kapp no-Lee kulinganisa i-T20 series All-round Nida Dar puts Pakistan 1-0 in T20 series Ama-Proteas esifazane azimisele ngokuthuthuka kuyela kumdlalo wokuqala we-T20 series enemidlalo emihlanu u-Moreeng usekela ukuqina komqondo kwi-South Africa kanye nekhono lokubuya kahle kuyela kwi-WODI yesibili u-Kapp uyakujabulela ukufika ukuqopha umlando kumsebenzi wakhe i-South Africa ihlelele i-ODI series yabesifazane Abancane babheke ukuthatha amathuba kuhambo lama-Proteas esifazane Ugculisekile u-Nackerdien ngokunwebeka kwabanamathalente Ikhempu yabesifazane yesizwe isiqalile e-Powerade Centre of Excellence i-CSA imemezela amankontileka amaqembu ama-Proteas ka-2019/20 i-CSA imemezela uhambo lasekhaya lama-Proteas esifazane bedlala ne-Pakistan